.သားကြီး Austin ကိုလည်း ချစ်လို့ မဝသလိုပဲ မကြာမှီမှာ တွေ့ရတော့မယ့်သားငယ်လေးအတွက်လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မိုးယုစံ. – Askstyle
.သားကြီး Austin ကိုလည်း ချစ်လို့ မဝသလိုပဲ မကြာမှီမှာ တွေ့ရတော့မယ့်သားငယ်လေးအတွက်လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မိုးယုစံ.
Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီး မိုးယုစံကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ မိုးယုစံကေတာ့ က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ မင္းသမီး တစ္လက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
ေအာင္ျမင္ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈအျပည့္ရရွိထားသူ မိုးယုစံကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ ခင္ပြန္းနဲ႕အတူ သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိ္ုင္ထားသူပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။ လတ္ရွိခ်ိန္မွာ ဒုတိယသားေလးကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရသူ မိုးယုကေတာ့ မၾကာမွီမွာ သားေလး မ်က္ႏွာကို ျမင္ရေတာ့မွာမို႕ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားေနသူပါ.။
ဒီေန႕မွာေတာ့ မိုးယုက သားႀကီး နဲ႕ အတူ ႐ိုက္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ ပံုရိပ္ေလးေတြနဲ႕အတူ “ညီေလးကို ေတြ႕ရဖို႔ ၁လပဲလိုပါေတာ့တယ္ မာမီ့ သားႀကီးေလးAustin ကိုလည္းခ်စ္လို႔မဝေသးဘူး#MoeYuSan #33weeks” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္.။
မၾကာမွီမွာ ဒုတိယသားေလးကို ေမြးဖြားရေတာ့မယ့္ မိုးယုစံေလးအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေခ်ာေမြ႕စြာပဲ ေမြးဖြားႏိုင္ဖို႕ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါဦးေနာ္.။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္သာယာတဲ့ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိ္ုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္.။
” သားကြီး Austin ကိုလည်း ချစ်လို့ မဝသလိုပဲ မကြာမှီမှာ တွေ့ရတော့မယ့်သားငယ်လေးအတွက်လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မိုးယုစံ”
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီး မိုးယုစံကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ မိုးယုစံကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ မင်းသမီး တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုအပြည့်ရရှိထားသူ မိုးယုစံကတော့ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ချစ်ခင်ကြင်နာ ခင်ပွန်းနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ လတ်ရှိချိန်မှာ ဒုတိယသားလေးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရသူ မိုးယုကတော့ မကြာမှီမှာ သားလေး မျက်နှာကို မြင်ရတော့မှာမို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသူပါ.။
ဒီနေ့မှာတော့ မိုးယုက သားကြီး နဲ့ အတူ ရိုက်ထားတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ “ညီလေးကို တွေ့ရဖို့ ၁လပဲလိုပါတော့တယ် မာမီ့ သားကြီးလေးAustin ကိုလည်းချစ်လို့မဝသေးဘူး#MoeYuSan #33weeks” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
မကြာမှီမှာ ဒုတိယသားလေးကို မွေးဖွားရတော့မယ့် မိုးယုစံလေးအတွက် ပရိသတ်ကြီးလည်း ချောမွေ့စွာပဲ မွေးဖွားနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active World ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။